China Galvanized I-beams စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
အမျိုးအစား- သံမဏိ ပရိုဖိုင် Tags: A106-A, A135-A, A178-C, A179-C, A192, A209-T1, A213-T9, A226, A250-T1, A335-P9, A53, သွပ်ရည်စိမ်ထောင့် သံမဏိ, သွပ်ရည်စိမ် ချန်နယ် သံမဏိ၊ Galvanized H-beam သံမဏိ၊ Galvanized စတုရန်းသံမဏိ၊ Galvanized သံမဏိ rebar
ကုသိုလ်ကံ သွပ်ရည်စိမ် I-beam သံမဏိ
Hot-dip galvanized I-beam ကို hot-dip galvanized I-beam သို့မဟုတ် hot-dip galvanized I-beam ဟုခေါ်သည်။သံချေးတက်နေသော I-beam ကို သံချေးတက်နေသော ဇင့်ထဲတွင် 500°C ခန့်တွင် နှစ်မြှုပ်ထားပြီး သံချေးတက်နေသော I-beam ၏ မျက်နှာပြင်နှင့် ဇင့်အလွှာကို ပွတ်တိုက်မှု ဆန့်ကျင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရရှိစေရန်။၎င်းသည် အမျိုးမျိုးသော ပြင်းထန်သော အက်ဆစ်များ၊ အယ်လကာလီအမှုန်အမွှားများနှင့် အခြားပြင်းထန်သော သံချေးတက်သော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်သည်။hot-dip သွပ်ရည်စိမ် I-beam ၏ ကုန်ကြမ်းမှာ I-beam ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးအစားခွဲခြားမှုသည် I-beam နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။လုပ်ငန်းစဉ် အမျိုးအစားခွဲခြားမှုအရ ၎င်းကို ပူပြင်းသော သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပူသောလိပ် I-beam နှင့် hot-dip galvanized cold-rolled I-beam ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။စျေးကွက်တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်မှာ hot-dip hot-dip galvanized I-beam ဖြစ်သည်။ယေဘုယျအားဖြင့် သွပ်ရည်ပူပူနှင့် အအေးခံထားသော I-beam များကို သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်အရ အအေးခံပြားများဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။1. ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်း 2. ကြာရှည်ခံနိုင်မှု 3. ကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု 4. ခိုင်ခံ့သော coating toughness 5. ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှု 6. အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လုပ်အားချွေတာခြင်း
အရွယ်အစား- 80*50*4.5mm-630*180*17mm သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို
လျှောက်လွှာ စက်မှုအဆောက်အအုံများတွင် သံမဏိသယ်ယူသည့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြေအောက်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကော်လံများနှင့် အထောက်အကူပြုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရေနံဓာတုနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကြီးမားသောအခင်းအကျင်းနှင့် စက်မှုဧရိယာတည်ဆောက်ပုံ၊ စက်မှုနှင့် မြို့ပြအဆောက်အအုံများတွင် သံမဏိထုပ်တန်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကုမ္ပဏီနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ကုမ္ပဏီသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပို့ဆောင်မှု၊ ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် နံပါတ်မှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိတ်ဖက်ကောင်းများဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု: သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ဘားများ
သွပ်ရည်စိမ် I-Beam သံမဏိစက်ရုံ